Home SORATRA FOTOTRA FOOTBALL SOUTH AMERIKA Mpilalao Football Arzantina Nicolas Otamendi Fitiavana an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pitiavam-bazana
Ny LB dia manolotra ny tantara feno momba ny Genius mpilalao baolina kitra malaza amin'ny anarana; 'Ny Jeneraly'. Ny Tantaram-pianakavian'i Nicolas Otamendi momba ny tantaram-pianakaviana ary ny zava-misy momba ny tantaram-piainam-baovao dia mitondra ny fitantarana feno momba ireo zava-nitranga voamarikao hatramin'ny fahazazany hatramin'ny fahazazany. Anisan'izany ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviana, ny fiainam-pifandraisana sy ny maro momba ny zavatra tsy fantatra momba azy.
Eny, samy mahafantatra ny fahaiza-manaony ny rehetra, saingy vitsy no mihevitra ny biography of Nicolas Otamendi izay tena mahaliana. Amin'izao fotoana izao, raha tsy misy adieu, dia aoka isika hanomboka.
Nicolas Otamendi Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pitiavam-bahaolana tsy hita isa -Voalohandohan'ny fiainana
Nicolás Hernán Gonzalo Otamendi dia teraka tamin'ny andro faha 12T of February 1988, ao Buenos Aires, Arzantina. Izy no Aquarius hatramin'ny nahaterahany. Teraka tamin'ny ray aman-drenin'i Arzantina izy ary ny vadiny Hernan Otamendi.
Nihalehibe i El Talar, tanàna kely iray tany Buenos Aires, Arzantina. Mpinandrom-bavaka maro izy tamin'izy mbola zaza. Raha ny marina dia nizara ny fotoany teo anelanelan'ny baolina kitra sy ny ady totohondry i Otamendi tamin'ny fahatanorany. Nihalehibe izy, nizara ny fotoana teo anelanelan'ny ady totohondry sy baolina kitra, nanangana ny heriny tao amin'ny gym teo an-toerana niaraka tamin'ny zanak'olo-mpiray tam-po aminy alohan'ny fanapahan-kevitra hanokana ny heriny rehetra ho an'ny lalao baolina kitra.
Nanomboka ny fiainany tamin'ny lalao baolina kitra tao amin'ny klioba Argentine teo an-toerana, Velez Sarsfield i Nicolas. Nandany taona 12 izy nitafy ny loko tao amin'ny tanora sy ny ekipa zokiny. Tamin'izany fotoana izany, dia nalemy tsara izy tany an-tranony. Na dia nitambatra toerana iray tao amin'ny ekipa voalohany aza izy, dia mbola nipetraka tany an-trano niaraka tamin'ny rainy sy ny reniny i Nicolas.
Nicolas Otamendi Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pitiavam-bahaolana tsy hita isa -Mitsangàna mba ho ankizilahy
Taorian'ny fampisehoana mahatalanjona teo amin'ny Fiadiana ny Amboara Eran-tany 2010 tany Afrika Atsimo, dia nosamborin'ny Porto tamin'ny Aogositra izy tamin'io taona io. Taorian'ny vanim-potoana roa nahomby, nandresy ny ekipa Europa League sy Portiogey Portiogey, nandoa € 12m an'i Valencia i Valencia. Ny klioba espaniola dia niady ny fahalianana avy amin'i Chelsea, Barcelona ary AC Milan. Nahita fotoana iray i Man City raha tsy nety nanao fiofanana na nilalao tamin'i Valencia i Otamendi. Nokapohin'izy ireo izany ary nanao sonia ny Jeneraly ho £ 28.5 tapitrisa. Ny ambiny, araka ny filazany, ankehitriny dia tantara.
Nicolas Otamendi Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pitiavam-bahaolana tsy hita isa -Relationship Life
Nicolas Otamendi dia manambady ny fitiavam-pitiavan'i Arzantina. Indray mandeha izy dia nahita ny vadiny nandeha tany amin'ny trano fisakafoanana iray tao afovoan-tanàna.
Tsy faly amin'ny sary eto ambany izy. Probably because Pep Guardiola dia namela azy tamin'ny lalao manan-danja.
Samy manana zanakalahy tsara tarehy izy ireo, ary mitovy amin'ny dadany.
Nicolas Otamendi dia fantatra ihany koa fa manana ankizy hafa izay mitazona ny antsipiriany.
Nicolas Otamendi Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pitiavam-bahaolana tsy hita isa -Military Style
Iray amin'ireo anaram-bavin'i Otamendi no Jeneraly, fankalazana ny fankalazàna ny tanjony izay itiavany ireo mpankafy.
Ny zava-miafin'i Nicolas Otamendi
Izy koa dia fantatra amin'ny anarana hoe El Mohicano. Ity rakitsoratra ity dia mifandray amin'ny volombavany.
Nicolas Otamendi Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pitiavam-bahaolana tsy hita isa -The Beard
Eo an-tampony i Nicolas amin'izao fotoana izao amin'ny ady ataontsika. Niaiky ny Arzantina indray mandeha fa manampy ny sariny feno herisetra sy sarotra izy.
Na dia tsy diso aza izy, mazava ho azy fa maro ny fotoana ary miezaka ny mandrindra ny endriky ny volony ny ezaka, izay, miaraka amin'ny taovolo amin'ny endriny amin'izao fotoana izao, dia tsy hamela azy hijery ny toerana.
Nicolas Otamendi- Mpanjakan'ny Beard
Ao amin'ny teniny.'Nanomboka naniry ny volombavam-bolo tao Valencia aho ary tiako ilay izy, ary nanomboka tamin'ny ankapobeny dia nanjary ampahany lehibe tamin'ny toetranao. "
Raha ny marina, ny volombavan'i Otamendi izay mamaritra ny fisainany mikitoantoana dia nahatonga fahombiazana maro tamin'ny asa aman-draharahany. Ohatra iray amin'ny fahombiazan'ny fahombiazana hita eto ambany.
Rehefa mandinika azy ny volombavan'izy io
Ohatra iray amin'ny trangan-tsoratry ny lozam-piraisan-tsakafo nohazavaina etsy ambany;
Nicolas Otamendi Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pitiavam-bahaolana tsy hita isa -The Tattoo
Fitaovana tatoazy nataon'i Nicolas Otamendi
Otamendi dia nanana tatoazy voalohany fony izy 14. Manana olona maro izy ankehitriny, ary samy manana ny heviny izy ireo. Ao amin'ny teniny "Ny rahalahiko sy iNy ankizy, ny raiko, ny reniko, ary farany, ny endriky ny raibeko dia voasokajy ao amin'ny vatako. mandra dnihinana, Raha toa aho ka seNy tetikasa izay manintona ny masoko dia handeha ho azy aho. "
Nicolas Otamendi Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pitiavam-bahaolana tsy hita isa -Ny zava-misy any Arzantina
Ny fanampian'i Otamendi ho an'ny ekipa Manchester City dia midika fa i Arzantina dia heverina ho toy ny firenena iray tena tsara indrindra ao amin'ny kianja City.
Ny foiben-toerany dia lasa Arzantina fahenina mba haka ny toerany ao amin'ny efitrano fiandrasana Etihad. Indray andro izy dia nanambara fa ny mpiray tanindrazana aminy Sergio Aguero dia iray amin'ireo antony lehibe amin'ny fanapahan-keviny hisolo an'i Valencia ho an'i Manchester. Hoy izy nanambara: "Hatramin'ny fotoana niresahako tamin'i Aguero nandritra ny Copa America iray, ny fahalianana avy amin'ny tanàna dia teny fanehoan-kevitra foana."
Nicolas Otamendi Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pitiavam-bahaolana tsy hita isa -Ireo mpiara-milalao ny andro nahaterahana
Ny Otamendi dia mizara ny tsingerintaona nahaterahany miaraka amin'ireo olo-malaza sasany fahiny, anisan'izany i Charles Darwin sy Abraham Lincoln. Vao haingana, ireo mpilalao horonantsarimihetsika Jesse Spencer sy Josh Brolin ihany koa dia mamely ny laboziny amin'ny andro iray toa an'i Nicolas.
Nicolas Otamendi Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pitiavam-bahaolana tsy hita isa -The Record Spoiler
Otamendi dia tsy misy fisalasalana, mpilalao spoiler. Indray mandeha, i Real Madrid dia nankafy ny rakitsorany manokana, izay nandresy tamin'ny 22 nandritry ny andalana, mandra-pihaonan'ireo gigabile La Liga manohitra ny Jeneraly, Nicolas Otamendi. Izy izay dia Cristiano Ronaldo dia nanokatra ny tifitra, fa i Valencia kosa niorina mafy hikororosy, ary tsy ela taorian'ny nisamborana, ny Jeneraly 6ft dia nitsambikina ambony tao an-habakabaka mba handresena ny tanjon'ity lohalaharana ity.
Izany dia nahatonga ny fiafaran'ity fandresena goavana nataon'i Real Madrid izay naharitra efa-bolana ity.
Nicolas Otamendi Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pitiavam-bahaolana tsy hita isa -Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Nicolas Otamendi dia avy amin'ny tarika iray ao an-dakilasy misy antonony tarihin'ny rainy. Nihanitombo ny asany teo amin'ny fiainam-pianakaviana rehefa nilatsaka ny fampiasana baolina kitra.
Samy miaina ao amin'ny renivohitra arzantina Buenos Aires ny ray aman-dreniny roa sy Mr Hernan Otamendi. Nicolas Otamendi dia voalaza fa akaiky ny reniny.
Nicolas Otamendi Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pitiavam-bahaolana tsy hita isa -Ny Idol
Ny sampy Nicolas Otamandi dia tsy olona hafa noho ny Roberto Ayala.
Raha nanao ny ekipan-dalan'ny World Cup ao 2010 i Otamendi, dia nanomboka nitafy fampitahana tamin'ny mpiray tanindrazana izy Roberto Ayala, izay nanao ny taon-jato ho an'i La Albiceleste. Ilay mpikomy (Ayala) nandritra ny fito taona tany Valencia teo anelanelan'ny 2000 sy 2007. Izy no nanampy tamin'ny fandresen-dahatra ny tanora mpianatra (Nicolas Otamendi) hanatevin-daharana ny klioba amin'ny 2014.
Nicolas Otamendi Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pitiavam-bahaolana tsy hita isa -Compression Man
Ny Jeneraly dia tia mampiasa boot compresso mba hanatsarana ny endriny sy ny fanarenana amin'ny tebiteby sy ny ratra.
Ireo boots ireo dia natao koa mba hanampiana atleta ho fampiroboroboana posture sy hampitombo ny fatran'ny rà.
Nicolas Otamendi Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pitiavam-bahaolana tsy hita isa -toetra
Nicolas Otamendi dia Aquarius amin'ny fahaterahana. Manana an'ity toetra ity izy mifandray amin'ny toetrany.
Ny herin'i Nicolas Otamendi: Izy dia fandrosoana, voalohany, tsy miankina ary ny maha-olona.
Ny fahalemen'i Nicolas Otamendi: Mihazakazaka amin'ny fihetseham-po ara-pihetseham-po, ara-pihetseham-po, tsy manam-pahaizana ary mampivelatra.
Inona no tian'i Nicolas Otamendi: Fialam-boly amin'ny namana, manampy ny hafa, hiady amin'ny antony, fifampiresahana ara-tsaina, mahay mihaino
Inona no tsy tian'i Nicolas Otamendi: Famerana, fampanantenana tapaka, toe-javatra manirery, manjombona na mampihetsi-po, olona tsy mitovy hevitra amin'izy ireo
Misaotra ny famakiana ny tantaram-pitiavan'i Nicolas Otamendi momba ny tantaram-pianakaviana sy ny zava-misy marina momba ny zavakanto. amin'ny LifeBogger, dia miezaka izahay mba hahatontosa ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mijery ity lahatsoratra ity ianao dia mametra ny fanamarihanao na Mifandraisa aminay!